Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka jaaliyadda Finland oo xildhibaanada barlamaanka Finland kulamo la yeelanaya
Maamulka jaaliyadda Finland oo xildhibaanada barlamaanka Finland kulamo la yeelanaya
Posted by ONA Admin	/ February 3, 2012
Maanta oo jimce ah waxaa kulan ku yeeshay xarunta barlamaanka dalka Finland xilibaan ka tirsan xisbiga Social Democrats iyo maamulka jaaliaayada S.Ogadenya oo kala ahaa gudoomiyaha jaaliayada Finaland mudane Maxamed Digaale iyo madaxa xidhiidhiyaha xafiiska arimaha dibada (HAD)ee jaaliyadda Finland mudane Cabdirxman dheere.
Shirka ayay maamulka jaaliayada iyo xilibaankaasi isku dhaafsadeen afkaaro badan oo khuseeya wadanka Ogaadeniya, xalaada bani-aadnimo ee ka jirta Ogaadeniya, labadii wariye ee u dhashay dalka Sweden ee lagu xidhay Itobiya iyagoo waajibaadkooda suxufinimo gudanaya iyo arimo khuseeya jaaliayda Finland.
xilibaanka ayaa aad u soo dhaweeyay xidhiidhka dhexmaray jaaliyada Finland iyo xisbigiisa aadna uga isago sheegay inuu aad uga xun yahay xaalada bini-aadnimo ee ka jirta Ogaadeniya.
jaaliayada iyo xilibaankuba waxay soo dhaweeyeen in xidhiidh noocan oo kale uu ka dhexeeyo waqtiyada sooscoda si lookala war qaato oo warbixin looga siiyo xaalka uu ku sugan yahay wadanka Ogaadeniya.
Sidoo kale jaaliyada waxaa u qorshaysan inay la kulmaan xubno ku jira baarlamaanka Finland isbuucyada fooda inagu soo haya hadii allah awooda lihi ogolaado.
Xubnihii jaaliyadda uga qaybgalay shirkaas ayaa ku qancay qaabkuu kulanku u dhacay iyo siduu xildhibaanku u danaynayo arimaha ka jira dalka Ogadenia, waxaadna moodaa inay axsaabta dalkan Finland danaynayaa qadiyada Ogadenia baryahan danbe.
Cabdiraxaam jarari Helsinki